Career Design လုပ်ငန်းစဉ် Vol.5Implementation and Self-Review | Mycanvas
Career Design လုပ်ငန်းစဉ် Vol.5Implementation and Self-Review
Career Design လုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်း အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ အဆင့်တစ်ခုစီကိုဆောင်းပါးအချို့နဲ့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုပြောပြပေးသွားမှာကတော့ Series ရဲ့ ၅ခုမြောက်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီးရီးမှာတော့ Career Design လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဘယ်လိုစတင်လုပ်ဆောင်ပြီး အစီအစဉ်တွေဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာတွေပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သင်ဟာ အဲ့ဒီ့အစီအစဉ်တွေကိုလိုက်နာပြီး အစီအစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကတော့ Career Design လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့ အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ကိုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် သင်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဆောင်လျှင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အစီအစဉ်တွေကို စတင်လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်မှာတော့ နောက်အချက်တစ်ခုအနေနဲ့ သင့်ကိုယ်သင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းက မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုတာကတော့ သင့်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ချင့်ချိန်စဉ်းစားခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။ အဲ့လို စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု ရှေ့ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အသိပညာဗဟုသုတ၊ စသဖြင့် သင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ အားနည်းချက်တစ်ခုခုကို သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေကို သင်တွေ့ရင်တော့ သင်မျှော်လင့်ထားတဲ့အနာဂတ်ကိုရရှိနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်မှုအသစ်မျိုးကို လုပ်ဆောင်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့လိုအချိန်တွေမှာတော့ သင့်ကိုယ်သင် Negative ဘက်ကနေ တွေးမထားသင့်ပါဘူး။ ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်သင်ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကို ရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက် သင့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အချိန်ဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ကျိန်းသေပေါက်ရှေ့ဆက်လျှောက်နိုင်မှာပါ။